Qadka tareenka casriga ah ah la dhisayo oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo bisha December – The Voice of Northeastern Kenya
Qadka tareenka casriga ah ah la dhisayo oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo bisha December
starfmke August 13, 2016
Wadada tareenka ah ee casriga oo laga dhisayo dalka gaar ahaan inta u dhaxeyso Magaaloyinka Nairobi ilaa Mombasa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo dhisitaankiisa dabayaaqa bisha December ee sanadkan aynu kugu jirno ee 2016-ka.
Wasiirka wasaarada gaadidka oo xaqiijiyay arintaasi ayaa noqoneysa mid 6 bilood kasoo hormeysa waqtigii marki hore la sheegay in uu dhamaanayo dhisida qadkaas casriga ah.
Musharuucaasi ayaa la filayaa in dadka kenyanka ah ay si weyn oga faa’idestaan islamarkaana wax tar weyn uu u yeesho.
James Macharia ayaa xaqiijiyay in hadda qadkaasi xoogiisa la dhameeyay waxuuna intaas kudaray in 90 boqolkiiba shaqada shaqaalaha gacanta ay dhamestireen shaqodooda iyadoo ilaa iyo hadda la soo dhisay 400 oo kiilomitar.
Wasiirka ayaa dhanka xaqiijiyay in sida lagu wado bisha Januaray la bilaabo doono isticmaalka wadadaasi.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo goor sii horeyay booqasha kutagay Magaalada Sultan Haamud ee maamul goboledka Kijiado ayaa sheegay in qadkaasi tarenka casriga ah la dhamestiri doono bartamaha bisha soo socota ee 2017-ka taas oo hadda u muuqato mid kasoo hormartay.
Wadadaasi ayaa waxaa ku baxayaa lacag dhan 3.6 bilyan oo doolar iyadoo 90 boqolkiiba ay bixinayaan dalka shiinaha oo gacanta kuhaysa dhisida qadkaasi halka 10 boqolkiibana oo kasoo baxayo dowlada dalka Kenya.
← Labada mas’uul ee ugu sareyso dalka oo u hablyeyay ciyaartoyada ka qeyb galeysay Olyombikada
Wadanka Kenya oo la sheegay in uu dunida ugu horeeyo kobaca dhanka dalxiiska →